Shiinaha warshad pin pin enameln iyo saarayaasha | Kingtai
XOOJIYADA CADAWADA CADANKA
Calaamadan naxaasta ah ee shaabadaysan waxaa ka buuxa dhaldhalaalka adag ee la isku qurxiyo, iyaga oo siinaya cimri dherer aan la dhaafi karin. Si ka duwan calaamadaha dhaldhalaalka jilicsan, looma baahna dahaadh epoxy, sidaa darteed dhaldhalaalka ayaa lagu shubayaa dusha sare ee birta.
Ku habboon dhiirrigelinta ganacsiga ee tayada sare leh, naadiyada iyo ururada, calaamadahaani waxay muujinayaan farsamo tayo sare leh.
Naqshadeyntaada caadadu waxay ka koobnaan kartaa ilaa afar midab oo waxaa lagu shaabadeyn karaa nooc kasta oo leh xulashooyinka dahab, qalin, naxaas ah ama niikel madow oo dhammaystiran. Tirada ugu yar ee la dalbado waa 100 kumbiyuutar.
Hore: Midab rinjiga la mariyey
Xiga: Biin daabacaada Dijital ah
Pin dhaldhalaalka Custom
Xididdada adag dhaldhalaalka